Byram - Warbixinta Sexy - Shirkada Cuntada - eGay Shop
Shipping Gaadiidka BILAASHKA ee Caalamiga ah!Shipping Gaadiidka BILAASHKA ee Caalamiga ah!
Your gaadhigii waa faaruq.
Secure Payment Gaadiidka BILAASHADA ee Caalamka
Dharka gogosha iyo cabbirka dharka gacmeedka
Wareegyada Qodobbada Lahaanshaha
Byram - Faahfaahinta galmoodka - Dharka Qarsoodiga ah
Badbaadiya € 5,00 (22 %)
Madow / S - € 16,99 EUR Dub / M - € 16,99 EUR Dub / L - € 16,99 EUR Dub / XL - € 16,99 EUR
100% Lacagta Bixinta SSL
Qalabka: Cilad Sinteed
Nidaamka Kalluunka: Qiimaha sare
Bixinta & Soo Celinta
Alaabtayada sida caadiga ah markabka 1-5 BUSINESS maalmaha (maalmaha ganacsiga ma ku jiraan dhamaadka todobaadka ama maalmaha).
Haddii amarkaaga ay ku jiraan waxyaabo caan ah oo la kulma arrimo la xidhiidha helitaanka saamiyada, amarku wuxuu qaadan karaa maalmaha ganacsiga 5 - 10 si loo hirgeliyo.
Fadlan ogow waqtiga maraakiibta waxaa saameeya caadooyinka, sahayda, fasaxyada iyo xilliyeynta.
Waqtiga Bixinta (Qiyaasaha Maaliyadaha Ganacsiga)
Shipping Free United States 8 - 35
Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska, Spain, Jarmalka, Netherlands, Ukraine, Japan, Belgium, Denmark, Finland, Ireland, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland 10 - 40
Dhammaan dalalka kale 15 - 50
Waqtiga Badeecada hoos ku xusan wuxuu ku xiran yahay heer aad u sarreysa oo ku saleysan badeecadaha aad dalbanaysid, 90% waqtiga uu qaadanayo waqti ka gaaban waqtiga ugu sareeya ee kor ku xusan.
* Fadlan ogsoonow in waqtiga la hayo ee ku xiran Wakaaladda Adeegyada Xudduudka Kanada, baakooyinka caalamiga ah ee caadiga ah ay qaadan karaan illaa 3 ee soo galaya Kanada oo ka imanaya bakhaarada Aasiya.
Siyaasadda Gaadhiga Caalamiga ah
Waxaan bixinaa Maraakiibta free Adduunka oo dhan shey kasta, wax iibsi ah oo aan loo baahnayn.
Amarrada oo dhan waxay ku xiran yihiin khidmadaha canshuurta iyo waajibaadka sida lagu qeexay waddanka soo dejinta. Lacagaha canshuuraha iyo waajibaadka kuma jiraan amarkaaga iyo / ama maraakiibta.
Egay Shop maaha mas'uul ka ah kharashka la xiriira soo dejinta. Dhamaan khidmadaha waa in ay bixiyaan qofka qaata qaybta.
Alaabadaadu waxay ku imaan kartaa baakado badan, iyadoon wax lacag ah oo dheeraad ah bixin.
Fadlan hubi in cinwaanka aad soo gashay uu sax yahay.
Marka amarkaaga la wareejiyo, waxaad heleysaa xaqiijinta maraakiibta adoo isticmaalaya email lambar leh.
Haddii aadan gabi ahaanba ku qanacsanayn iibsashadaada, waxaad ku soo celin kartaa sheygaaga maalmaha 30 ee soo celinta sheyga oo buuxa.
Qiimaha dhoofka waa lacag aan la soo celin karin waxaadna mas'uul ka tahay inaad bixiso qarashaadkaaga maraakiibta si aad ugu soo celiso sheygaaga. Haddii laguu soo celiyo lacag celin, kharashka dib u celinta maraakiibta ayaa laga jarayaa lacagta laguu soo celinayo.
Adebayor - Trunks - Maqaayada Gay ee dharka € 34,99 € 24,99
Allen - Boxer - Dharka ragga ah ee ragga ah € 34,99 € 24,99
America - Warbixin - Maqaayad Gabar Ragga ah € 29,99 € 19,99
Amir - Warbixin - Dharka Qarsoodiga ah € 21,99 € 15,99
Ciid - Jockstrap - Qashinka Cuntada ah € 21,99 € 15,99
Arthur - Jockstrap - Dharka Qashinka € 22,99 € 16,99
Waxaan bixinaa maraakiibta bilaashka ah ee adduunka oo dhan wax iibsiga ugu yar
Maalmaha 30 Soo Celinta
Si fudud u soo celi 30 maalmood beddelka ama lacag celinta
Waxaan xaqiijineynaa bixinta lacagta leh SSL by Kaarka Deynta, Visa iyo MasterCard
Gaadiidka & Bixinta
Noqo VIP Maanta *
Ku soo dhowoow Wargeyskayaga oo ka hel 10% iibsashadaada ku xigta!
Waxaan cadeynayaa in aan ahay 16 da 'sano ama ka weyn oo aqbalaya in ay helaan ganacsiyada iyo shakhsiyaadka shakhsi ahaaneed "Egay".
Waad ka laaban kartaa ogolaanshahaaga wakhti kasta iyada oo loo marayo isku-xirnaanta abiilka ee wargeyskayaga ama nala soo xariir email ahaan. Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan xuquuqdaada, arag annaga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Fadlan calaamadi keeska kore
Dhammaan xuquuq dhowran.
Diido Qaadashada iyo Bixinta
Si aad u hesho fariin qoraal ah, si aad u aragto in aad ka mid ah sirleynaya suuqyadana si aad u tashadaan.
1 / Tu liisan aan leenahay?
Dareeraha miyir beelka, ma'aha farsameerin ma'aha codsiga Dalbashada. Si aad u ogaato fariin qoraal ah oo ku saabsan fariin qoraal ah. C'est aussi gràce déféré génér séc es détre décér sénéré bénéficier de toutes les mises à l'de l'aat de l'de l'de l'hou l'hou l'là là là là là là là là là là là là là là là.
Shubo faa'iido leh Fastlane, Doodda indices dans nos shuruudaha, waa inaad ka heshaa liisanka baasaska. Tuwaanka oo aan la socon: https://by.ecomacademy.io/fastlane
N'hésite pas naga caan ah oo ku dhaji su'aasha toute: fastlane@ecomacademy.io